Aqoonkaab WAA MAXAY CAGAARSHOG (A ) AMA Hepatitis A ? | Aqoonkaab
WAA MAXAY CAGAARSHOG (A ) AMA Hepatitis A ?
Dec 19, 2018Caafimaadka
Cagaarhowga A waa cudur ku dhaca beerka oo laga qaado fayruska cagaarshowga A (HAV).
MAXAY YIHIIN CALAAMADAHA LAGU GARTO CAGAARSHOWGA (A)?
Dadka qarkood waxaa laga helaa calaamado aad u ba’aan dad kalena waxba laguma arko.
• Caruurta guud ahaan wax calaamad ah laguma arko.
• Haddii calaamadaha ay jiraan, bilawga waa mid kedis ah oo wata qandho,
• cuntada oo laga go’o, iyo
• lallabbo .
• Kaadi madow (midabka shaaha ama kokakoolada),
• saxaro midab furan leh,
• indhaha ama jirka oo midabka jaalaha (indha caseeyee) ayaa dhowr cisho kaddib la arkayaa.
Cagaarshowga waxa inta badan uu ku dhaca dadka waweyn ee caruurta kuma uu dhaco.
MAXAA IGA SOO GAARI KARA CAGAARSHOWGA (A)?
Cagarshowga A waa cudur mudda yar ku haynaya. Ma noqonaya cudur dabadheeraada (mudda badan ku haya).
• Cagaarshowga A mararka qaarkood wuxuu noqon karaa mid si ba’an, oo kedis cudur gaarsiiya beerka (cagaarshoga kugu soo booday).
• Dadka inta badan halistaweyn u ah in dhibaatadan waa kuwa qaba cudurro kale ee beerka ah.
MA JIRA TALAAL LOOGU TALAGALAY CAGAARSHOWGA (A)?
Haa, tallaal ayaa diyaar u ah qof kasta oo jira12 bilood ama ka weyn donayana in ay iska difaacaan cagaarshowga A.
Tallaalka cagaarshowga A ayaa lagu taliyaa in laga qaado dhammaan ilmaha jira 12 bilood.
YUU KU DHACAA CAGAARSHOWGA (A)?
Qofkasta of da’ kasta jira ayuu ku dhacaa cagaarshowga A. Dad badan war uma hayaan meesha ay ka qaadeen cagarshowga A.
Dadka halista u badan u ah in uu ku dhaco cagaarshowga A waa:
• Guriga ay degganyihiin dad qaba cadurka.
• Lala galmoodo dad cudurka qaba.
• Dadka, siiba caruurta ku nool meelo uu ku badanayo cudurka cagaarshowga A.
• Dadka u safra dalalka ay u badantahay in cudurka cagaarshowga A uu ka jiro.
• Dad isku dura cirbadaha daroogada iyo ku isticmaala daroogada aan cirbad lahayn.
CAGAARSHOWGA A MA LEYAHAY QAAB LAGU TIJAABIYO?
Tijaabada dhiigga aya lagu caddayn karaa haddii uu qofka uu dhawaan ku dhacay ama uu qabo cagaarshowga A.
SIDEE CAGAARSHOGA (A) LAGU KALA QADAA?
Cagarshowaga A waxa uu ku faafa marka feyruska laga helo saxarada qof qaba cagaarshowga A. Qofka waxa uu cudurka cagaarshowga A uu gaaro afkiisa ama afkeeda.
Siyabada caadiga oo ay tani ku dhacdo waa:
• Marka la cabo ama la cuno cunto iyo biyo hallaabay.
• Marka waxyaabaha lagu cayaaro ama wax la mid ee faddaroobay afka la galiyo.
• Marka aan gacmaha si fiican laysaga dhaqin saxarada kaddib ama diyabarka la
• badalo kaddib.
• Marka la galmoonayo.
Ilmaha waxa ay fayruska qaadsiin karaan xubin qoyska ka tirsan ama qofka daryeela xitaa iyaga oo aan lagu arkin calaamadaha cudurka.
ILLAA INTEE AYAY KU QADANAYSAA IN QOFKU UU DADKA KALE QAADSIYO CAGAARSHOWGA (A)?
Qofka qaba cagaarshowga A waxa uu faafin kara cudurka laba usbuuc inta aysan ka muuqaan astaamaha cudurka ilaa hal usbuuc marka uu ku bilawdo cagaarshowga. Haddii uusan qofka qabin cagaarshowga, qofkasi waxa uu faafin kara cudurka laba usubuuc kaddib marka lagu arko calaamdaha.
MAXAA LA SAMEYNKARAA SI LOOGA HORTAGO SI AAN DADKA KALE LOO QAADSIN?
• Tallaalidda waa sida ugu fiican ee looga hortago faafidda cudurka cagaarshowga A.
• In aad si taxaddar leh gacmahaada aad dhaqdid marka aad musqusha gashid, iyo marka aad baddashid dayberka iyo inta aadan billaabin diyaarinta ama cunista cuntada waxay kaa horjoogsanayaan in cagaarshowga A uu fido.
• Diffaaca Globulin (IG) oo la siiyo si aanay u samaysmin astaamaha, waxay ku xirantahay kolba sida qofka uga muuqdo cagaarshowga A.
MA JIRAA WAX LAGU DAAWEYO CAGAARSHOWGA?
Ma jirto daawa qaas oo daweyn karta qof qaba cagaarshowga A. Dadka qaarkooda oo six xun u jirrada waxaa la dhigaya isbitaalka si loo baddalo dhacaanka jirka ku jira haddii marka uu ku dhacay mantag ama shuban badan.
Previous PostJoonis Cadka ( Hepatitis B ) Next PostLiin Dhanaanta